Njengoba wazi, ezizweni zonke idume izici zayo ezithile, izici ezivelele, lihlukaniswe abanye. Lokhu kungaba cuisine nokuba khona sebuningini izitsha bendabuko ngumnikazi izindlela sokulungiselela kanye feed imikhiqizo. Futhi uma, isibonelo, abantu abaningi unombono kanjani nokuthi yini okumelwe uncamela udle isiFulentshi, isiNgisi, Chinese, nokunye. E., Lokho kwencazelo izintandokazi ukudla baseMelika kungaba inkinga. Ngakho-ke, kulesi sihloko ongathanda zingcwele ajwayelane yokuthi baseMelika ukudla nsuku zonke, ukunikeza izibonelo zokudla okuyisisekelo ezakha sasekuseni yabo, ukudla kwasemini kanye sokudla.
Eqinisweni, cuisine American libhekene lula futhi kuqhathaniswa okusezingeni eliphezulu yayo calorific value futhi hybrid of Indian kanye lathathwa European, izitsha Asian, zokupheka okuye kancane zibukezwa futhi ehambisana yokuphila yakho. Nokho, abantu abaningi bezinye izizwe, kusukela maphakathi nekhulu lama-20 kwaba khona ngemibono ngalokho baseMelika udle. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi banayo cult letihamba ukudla okusheshayo, okungukuthi abantu ngothi lwabo abendawo adle "McDonalds", ezidayisa i-pizza okusheshayo, ngaphandle kokucabanga ngezingozi ukuthengisa kubo ukudla.
Ngempela, i-American ejwayelekile maqondana umsebenzi wabo okungamahlalakhona Ukushesha okukhulu kwezinguquko ukuphila akudingeki isikhathi ukupheka olinganiselayo futhi ukudla okunempilo ekhaya. Kulula oda into esihlwabusayo ngokushesha yokumatisa e ikhefi eseduzane noma ukuthenga imikhiqizo Semi-siphelile nokudla okusemathinini esitolo.
Kubalulekile ukuphawula ukuthi isidlo esikhulu futhi obukhulu kakhulu kuleli zwekazi American kubhekwa dinner, ngoba kuphela kusihlwa, njengoba umthetho, imikhaya American nethuba ukungacabangi umsebenzi futhi bachitha Ngobusuku obuthule nabantu obathandayo.
Ukudla kwasekuseni abayikhokhela ukunakwa okungenani, ngoba isikhathi esiyigugu ekuseni ezingenangqondo ukuchitha ngokupheka. Kwasekusithi emini emahholo okudlela, zokudlela ungabukela emugqeni zabantu, zikuyise wayala, futhi ngemva kokuphothula ikhofi yakhe njalo emgwaqeni futhi izithuthi zomphakathi.
Uma sihlaziya ukuthi baseMelika udle, kuba sobala ukuthi ukudla yaso ikude lesifanele, njengoba ukudla ngesimo ukudla okulula, sandwich noma amakhukhi ebaleka nsuku zonke kusihlwa umthwalo esiswini kunomthelela omubi kwezempilo, okuholela isisindo okweqile. Manje, ngenhlanhla, lo mkhuba ukuba ahole indlela yokuphila enempilo zasakazekela kulo lonke izwe, futhi amaMelika, abaningi babo zigcwele, abantu abakhuluphele, cabanga isidingo sokushintsha indlela adla.
okukhethwa kukho ibhulakufesi
Umbuzo lokho baseMelika ukudle njengesidlo sasekuseni, ungakwazi uhlu afanayo engapheli bystrouglevodnyh imikhiqizo, okuyinto chithi emhlabeni wonke nje ngenxa abakhileyo INguqulo Yezwe. A option ethandwa lesidlo ekuseni bathola corn ishq ne ubisi, zonke izinhlobo sandwich (efana ethengiswe "McDonald"), ubhontshisi ibhotela, uju, ujamu, bendabuko IsiZulu ubhekeni kanye amaqanda nakho ukuba khona emikhayeni eminingi ekuseni.
Cishe noma yimuphi cuisine American isiqiniseko ukuthola ozithandayo uswidi zabo - nebhotela lamantongomane, usulubha nojamu ngisho ofakwe ezahlukene. Iningi labantu balapha wawo wonke umphefumulo enikelwe amaswidi kanye nemikhiqizo ufulawa, ngakho banesikhathi izinga donuts, amakhekhe, Pancake, amakhukhi, ehla ekuseni. Njengoba for iziphuzo, kwasekuseni American ephelezelwa ikhofi, ubisi noma ayo fresh (ngokuvamile orange). Phakathi kwezinye izinto, eziningi abantu bathande nesinamoni vanilla, enezela ukudla kwakho nabo.
Sikhatsi sekudla kwakusihlwa!
Isidlo sasemini, kwasemini ezahlukene iqala Melika endaweni amahora nanye noma nambili. Lesi sidlo ezenziwe makudle imikhiqizo ngokushesha bazogcwalisa umzimba, esilungele ukudla ekuhambeni.
Ukuhluka lokho baseMelika udle eyodla, impela kancane. Ngokuyisisekelo okufanayo sandwich, imiqulu, Burgers, meatballs ne inyama, imifino noshizi, futhi enye inkomishi yekhofi elishisayo. Kungenjalo, angase adle nocezu pizza kanye Coke, like isaladi "uKhesari", evamile amazambane ecubuziwe noma irayisi nge umvimba uphizi, i-yogurt nati noma iphakethe bhisikidi. Ngokuhamba kosuku Ungadla eyenziwe ngesimo imigoqo ethandwa, izithelo, amaswidi, ikhofi futhi.
ukudla Izintandokazi - idina
Ukuze isidlo sakusihlwa abantu Melika sisondela sina enkulu. Sizozama ukucacisa lokho baseMelika udle eyodla. Ngalesi sikhathi etafuleni umndeni wabo ugcwele ezihlukahlukene. Ngokuyinhloko bona ukupheka inyama, wakhetha Fry steaks phezu hlupha. Popular inyoni futhi nakuphi kodwa Melika nambitha turkey okumnandi nge ukugxusha wakhe ngazo zonke izindlela? Futhi mayelana imilenze inkukhu, amaphiko, okuyigugu Awukwazi ukusho, phela, ngakho konke Sekuyisikhathi eside kwaziwa uthando yezakhamuzi zendawo ukuze inkukhu inyama.
BaseMelika abanandaba Hlobisa, okusanhlamvu ngokuvamile kubangela badideke yabo. Wozani irayisi usizo nge imifino, spaghetti, ubhontshisi noma uphizi, amakhowe, futhi yebo, amazambane. By the way, abasakwazi ebucayi kukhethwa sauce for isidlo. Uma thina imayonnaise kuyinto okufakiwe jikelele ekudleni, khona-ke uzothola lenqwaba kusaladi, isoso, ezikhethiwe ngaphansi ukudla okuthile: Tabasco, soy, teriyaki, ushizi, tartar, lwesinaphi, kanye nabanye. Eyodla, abazange badikibale kusuka isobho, okuyinto Yiqiniso, ayifani edumile isobho, isobho kanye nezinye. Akunakwenzeka ukuba uqaphele umkhiqizo abadumile - ummbila ekhula amakhulu eminyaka emazweni aseMelika kanye abathandwa bendawo. It is ezidliwayo eluhlaza okuphekiwe ne ukwengeza ibhotela, ngesimo ama-popcorn kanye corn ufulawa ubhake amaqebelengwane okumnandi.
A dessert kuyinto?
Yini dinner yimpumelelo ngaphandle awukudla sweet? I izintandokazi Pudding, apula noma ithanga pie, ice cream, cottage shizi izibiliboco, Muffin, ushokoledi, candy, edumile chocolate chip cookies, nokunye. D. Yidla kubo, ngokuvamile ingilazi juice, ubisi, ukhokho noma ikhofi.
Uma kungekho isikhathi noma ukuvilapha kakhulu ukupheka ukudla
Kuyathakazelisa ukuthi nakuba ithuba ukupheka ukudla yabo, America eside ngayingcwelisa baragela phambili ukuzijayeza iyala ukudla ekhaya. Le sevisi ivumela ukuba uchithe isikhathi sakho mahhala ngemuva ipuleti, kanye ncamashi ukuthi ufake ini bayodla esihlwabusayo. Kukhona izikole eziningi ezinhle, lapho baseMelika udle. Amathilomu, izindawo zokudla, Pizzeria, ezemidlalo bar kukhona kuyaqabukela ezingenalutho, ngoba abantu abaningi kuzo ngenkathi kude kusihlwa nenkampani ezinhle, umculo nokudla okumnandi. Eminyakeni yamuva, abaningi bakhetha cuisine Asian, njengoba kuyinto okubabayo, flavorful nokunomsoco. Sushi, imiqulu, noodle, miso isobho, irayisi kwasolwandle baseMelika njalo e baningi. burritos Mexican, Chili, fajitas eside kakhulu kwaba ingxenye ekudleni abakhileyo zwekazi American.
Kungase kubonakale ukuthi abantu baseMelika ukudla akuyona ukudla okunempilo. Lokhu kuyiqiniso, cishe kanye nazo zonke ukudla kwabo noma ngobuhlanya amnandi noma okubabayo, okuthosiwe ku ibhotela, kodwa ngesikhathi esifanayo esihlwabusayo kakhulu. Ngokuvamile, abantu abaningi abaye kulesi mazwe aseMelika, abangu ejabulela ukudla kwabo. Impela kuwufanele ngizame ukubona lokho ezazithandwa abantu bendawo.
Isinongo Herb: igama nesithombe
Indlela ukupheka Unogwaja ngesikhathi: amathiphu wabaqalayo abapheki
Konke zucchini ewusizo
Bangaki isipuni igremu Mkhiqizo Ukuqhathanisa Ishadi
Imithetho the game - a conservatism yesimanje
Enteritis - kuyini? Izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Raykin Konstantin: yangasese ukuphila, umkhaya, izithombe, i-Filmography kanye biography
Ukufaka ifenisha buxhomeke: izinhlobo izesekeli, inhloso kanye nemithetho ukufakwa